Estradiol benzoate duritaanka (Estrogen) - Shiinaha Ningbo Hormone Labaad
Bovines & Doofaarka
Hormone Taranka Fish
LHRH-A3 Durayo isticmaalka Fish
LHRH-A2 Durayo isticmaalka Fish
Xarunta S-GnRHa Waayo, duritaanka (Ovuhom)
Xarunta Gonadotrophin Durayo (Ovumon)
Chorionic Gonadotrophin of duritaanka (HCG)
Estradiol benzoate duritaanka (Estrogen)
Estradiol benzoate duritaanka (Estrogen) [Description] wax soo saarka Tani waa huruud ah dareere cirro leh dufan leh oo hufan. [Function iyo isticmaalka] Waxaa kor u qaadi kartaa horumarka ka mid ah Calaamooyinkiisa labaad galmada iyo formation of xubnaha taranka xoolaha dhaddig, kor loogu qaado shaqo ee foosha for uteruses iyo oviducts, la kordhiyo dareen ee uteruses in oxytocin, iyo kor u nasashada ee daloolada afka ilmo-galeenka. Waa inay awoodaan inay kor u qaado horumarka of nidaam koollo caanaha. Iyada oo qadar yar oo ah progesterone ...
Estradiol benzoate duritaanka (E strogen )
Alaabta Tani waa huruud ah dareere cirro leh dufan leh oo hufan.
[Function iyo isticmaalka]
Waxaa kor u qaadi kartaa horumarka ka mid ah Calaamooyinkiisa labaad galmada iyo formation of xubnaha taranka xoolaha dhaddig, kor loogu qaado shaqo ee foosha for uteruses iyo oviducts, la kordhiyo dareen ee uteruses in oxytocin, iyo kor u nasashada ee daloolada afka ilmo-galeenka. Waa inay awoodaan inay kor u qaado horumarka of nidaam koollo caanaha. Iyada oo qadar yar oo ah progesterone, waxay tahay degdegga karaa xoolaha dhaddiga ah si aad u jecel yihiin galmada iyo reyn galmada. Alaabta Tani waxaa si balaadhan looga codsatay in xuubka ceshan uurjiifka, endometritis, iyo pyometra minka ka dib dhalmada xoolaha dhaddig. Waxa kale oo loo isticmaali karaa muruqyada makaanka daciif ah marka iskaashi lala isticmaalo oxytocin. Intaa waxaa dheer, waxaa laga codsadaa in geeddi-socodka horumarinta qanjirada caanaha ee induction ee nuujinta, lo'da.
[ U xikmadda iyo Qiyaasta]
1. iskaashi lala isticmaalo uurka Mare Serum Gonadotropin in la sameeyo calaamado estrous cad inta lagu jiro kor u qaadida estrus: si loo fududeeyo ogaanshaha ee estrus iyo calaamadahaaga estrous cad marka uurka Mare Serum Gonadotropin waxaa laga codsadaa in ay kor u qaadaan estrus, duridda of 6-8mg of estradiol benzoate la fulin karo maalintii labaad ka dib markii la isticmaalayo uurka Mare Serum Gonadotropin.
2. Horumarinta dareenka ee murqaha makaanka in oxytocin: Codsiga of estrogen-socodka ah ee dhalmada aan kor u qaadi kartaa oo keliya furitaanka daloolada afka ilmo-galeenka, laakiin kordhiyaan dareenka ee murqaha makaanka in oxytocin. duray of oxytocin Ka hor, benzoate estradiol lagu duri doonaa, oo kacmaha waa sida soo socota: 3-10 mg for doofaarro, 5-20mg lo'dooda, 10-20mg oo fardaha, 1-3 mg u bixiyaa idaha daraaddood, 0.5-2.0mg waayo, eeyaha, oo 0.2-0.5mg bisadaha.
3. Daaweynta cudurada, makaanka, waxa lagu daweyn karaa endometritis, tiiro makaanka (subinvolution ee ilmo-galeenka), iyo ceshan xuubka uurjiifka dhalmada kadib markii iskaashi lala isticmaalo oxytocin. Estradiol ugu horeysay lagu duri doonaa (20-30mg xoolaha weyn, 10-20mg xoolaha dhexe yimaa-, iyo 5-10mg xoolaha yar yar), ka dibna oxytocin waxaa loo isticmaali doonaa si loogu daweeyo (75-100IU lo'da iyo fardaha, 30- 50IU for doofaarro iyo ido, 10-25IU ah eyda, iyo 5-10IU bisadaha); duridda ama duray intrauterine lagu saleyn doonaa, oo mar 7 maalmood oo kasta.
4. Horumarinta estrus: qaadasho sare ee benzoate estradiol waxaa loo isticmaali karaa si kor loogu qaado estrus xoolaha anoestrus kiliinikada; Si kastaba ha ahaatee, estrus waqtiga sida caadiga ah ma siin karo kici horumarinta caadiga ah ee follicle in ovulate, laakiin caadi wareegga estrus ah. kacmaha waa sida soo socota: 10-20mg lo'da iyo fardaha; 5-10mg for doofaarro ah; 3-5mg u bixiyaa idaha daraaddood.
1. qaadasho High, muddo dheer ama si xun loo isticmaalo wax soo saarka this keeni kartaa fiix ukun-side, ilmo iska soo ridid, atrophy ugxansiduhu iyo qabtay wareegga galmo xoolaha dhaddig.
2. ahaan uu xayawaanka cunto.
3. Kaliya loo isticmaalo dhalmo xoolaha.
4. ma aha in laga taabtay by carruurta.
28 maalmood oo ah dibi, iyo ido doofaarro (gaadh); 7 maalmood ee caanaha (gaadh)
Hadhka iyo hawadu; kaydiyaa hoos heerkulka of 30 ℃.
Previous: Dexamethasone Sodium Phosphate duritaanka
Next: Gonadotropin Durayo (GnRH)
estradiol benzoate 0.2% duritaanka
estradiol benzoate Animal duritaanka
duritaanka östradiol benzoate
LHRH-A2 for Bovines duritaanka & Doofaarka
Adrenaline hydrochloride duritaanka
Oxytocin duritaanka (Pitocin)
Tristerone Complicis duritaanka
LHRH-A3 for Bovines duritaanka & Doofaarka
Our Altrenogest maray GMP Certificate
Macaamiisha booqday Our Facility